Ndakasvirana neMukomana Wangu Ndikaona Nyenyedzi ! – VanodaZvinhu
Ndakasvirana neMukomana Wangu Ndikaona Nyenyedzi !
by DrSviro · January 31, 2016
Mukomana wangu aigara kuHarare ini ndichigara kuBulawayo, ndakaenda kunomuona for the weekend and takasvirana kakawanda asi there was one time ndakanakirwa ndikaona nyenyedzi.
Takaenda out kuimwe sports bar kwaibhoiwa and I kept telling him handei kumba so after a few drinks takaenda kuFlat rake. Ndakaenda kunogeza ndikapfeka maPjs angu iye ainge atopinda mublanket already, ndakauya ndikarara next to him ndikatanga kumukisa zviri deep zvekuti kukisana kwatainga takuita zvairatidza kuti tese taiva nezemo riri serious. Since tainge tavanenguva tisina kumbosvirana akasimudza top yangu kusiya mazamu angu asina kupfeka akabva aisa pant rangu paside akatanga kundibata ndichibva ndatanga kuchemerera.Akaisa chigunwe mubeche rangu rainga ratota kare achindisvira nacho, akabva aisa chimwe akatanga kusvira achitamba nekabeans kangu at the same time.
Ari busy kundisvira nezvigunwe ndakasverera mboro yake ndikatanga kuibonyoro,ndakabvisa boxer rake ndikatanga kuidya mboro yake akabva aiita kunge akupenga nekunakirwa. Akandi pusher akauya pamusoro pangu seakuda kusvira, akabvarura shirt yake ndokutanga kutambisa mboro yake pamuromo webeche rangu just to tease me. Akatanga kuiyisa zvinyoro nyoro ndikaridza mhere asi haana kumira kusvikira mboro yese yanyura mubeche rangu.Zimboro rake raive zihombe zvekuti ndairwadziwa nekunakirwa at the same time, ndamubvisa pandiri ndikabva ndaenda pamusoro ndikatanga kumukoira zvinesimba ndakaona munhu akudhinza masheets apa magaro angu airova makumbo ake ndiri pamusoro handina kumira kumukoira.Iwe ka! Akaita kundidhinza magaro zviri tight akatanga kundisvira aripasi ipapo.
Akandibvisa pamusoro ndobva takuita missionary chaiyo apo ndainge ndakunyatsosvirwa, ndainzwa kunge beche raita loose zvekuti ndakatunda kasingapere ndakaramba ndakamubata ndimuudza munzeve kuti ndirikuda kuti utundire mukati kati. Akatanga kusvira very fast ndikaona munhu arasa rhythm, akaita kunge aputika mubeche rangu achitunda ndikanzwa kuti every drop rapinda. Takarara for a while mboro yake irimo mubeche rangu, akabva aenda kunogeza and I decided to write this kuti muzive kunakirwa kwandakaita.
by DrSviro · Published August 14, 2015
Kusvirwa threesome ne maold classmates mates kuno kuHukeyi
Next story Kukwira Getty weMazigaro nemaZizamu paParty
Previous story Kubatwa naThembeka Ndichisvira Shamwari Yake muSwimming Pool